Saxiixa Turkey ee Mashaariicda Kaabayaasha ugu si Marsh | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMarsh Saxiixa in Mashaariicda Kaabayaasha Turkey ugu
17 / 10 / 2017 34 Istanbul, tareenka, GUUD, hyperlinks, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Metro, TURKEY
Marsh, oo ka kooban khubaro badan 600 "Kooxda Investments Kaabayaasha Global" Turkiga iyo sidoo kale dalka 130 sii saxiixa mashaariicda kaabayaasha ugu weyn.
Marsh Caymis wuxuu ahaa arin khuseeya maalgashiga ama hawlgalka mashruucyo daraasad oo ka kala socday Yavuz Sultan Selim Bridge, Madaarka Magaalada Istanbul, Eurasia Tunnel ilaa Marmaray. CEO Marsh Hakan Kayganac ee Turkey, "maalgelinta kaabayaasha dalka Turkiga helay hawl-wadeeno sannadihii la soo dhaafay. Annagoo ah Marsh, waxay bixiyaan la-talin khatar ah oo heer caalami ah iyo adeegyo caymis oo leh khibrad sanadeedka 105 ee Kooxda Global Investment Infrastructure Investments Group ee mashaariicdan ".
Xarunta oo ku yaalla Marsh & McLennan Group Maraykanka shirkadaha, shirkadda dilaalista caymiska iyo maamulka khatarta keentay dunida ee bixinta adeegyada dalladda ah ee Marsh Insurance, soo arko dunida ka sii wadaan in ay u guuraan Turkey. In 130 ka badan hal wadan, "Kaabayaasha Marsh Global Investments Team" by bixinta adeegyada heer caalami talinta khatarta iyo caymiska maalgashiga kaabayaasha Marsh, Turkey ayaa sidoo kale uu saxiixay mashaariicda kaabayaasha ugu weyn. Yavuz Sultan Selim Bridge ee 3 Istanbul. Airport Eurasian Bridge Tunnel ka Osmangazi ilaa tobaneeyo mashaariic ku yaalla Somailand Marsh ee Turkey, 105 billion dollars guud ahaan ilaa hadda in ay dhexdhexaadiyaan hawlaha caymiska.
Qeyb ka mid ah mashaariicda ugu weyn!
Mashaariicda ugu weyn ee mashaariicdaasi waa Mashruuca Maddaarka ee Istanbul, oo haatan dhismaha lagu jiro. mashaariicda ee aduunka ugu weyn waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha cusub oo ku yaalla Istanbul Turkey Project Marsh, muddo maalgashiga dhacay sida Somailand. Marsh Turkey, Yavuz Sultan Selim Bridge iyo Northern xumeeyayna ugu wayn Project ayaa sidoo kale helay sida Somailand ka mid ah muddooyinka maalgashiga. Mashruuca loo yaqaan "Osman Gazi Bridge iyo Gebze-İzmir Motorway", Marsh, mashruucan, argagixisada, masiibooyinka dabiiciga ah, dhulgariirka, dabka, sida caymiska dhexdhexaadka ah ee khatarta. Marsh Turkey, Eurasia Tunnel, labadaba wajiga dhismaha iyo wajiga hawl ahaa dhex-dhexaadin ah oo loogu talogalay hawlaha caymiska. Mashruucyada kale ee Marsh ee kale waa sida soo socota: Maalgashiga maalgashiga maalgashiga mashruuca Galataport, macmiilka xilliga maalgashiga ee mashruucyada isbitaalada magaalooyinka ah ee ku yaalla Adana, Yozgat, Bursa, Elazig, Kocaeli iyo İzmir iyo maalgelinta maalgelinta mashruuca Marmaray.
"MASHRUUCA SHAQSIYADA HESHIIS"
Turkey Hakan Kayganac CEO of Marsh, adduunka oo dhan 100 sano waayo-aragnimo ayaa sheegay in ay sidoo kale sharaf iyaga inay ka qayb qaataan mashaariicda kuwan. Gan Halista adduunka ayaa sii wadda inay sii korodho. Si loo xaqiijiyo bedelka halista ugu habboon, qiyaasaha khatarta ee mashruuca ama hantida ayaa muhiim ah, waana muhiim in si sax ah loo qoondeeyo khatarta ka dhexeysa ka qaybgalayaasha mashruuca, labadaba iyo mustaqbalkaba. Waxaan bixinnaa talooyin khatarta khatarta ah iyo adeega caymiska adduunka oo leh Kooxda Caalamiga ah ee Maal-gashiga Maal-gashiga, oo ka kooban kooxo khibrad u leh 600. H Marsh waxay ka warqabtaa khataraha u gaarka ah ee maalgashadayaasha iyo bixiyaasha iyo sidoo kale dhismaha iyo qaybaha guud, kuwaas oo ka wada shaqeeya mashruucyo badan oo kaabayaal ah, oo gacan ka gaysanaya dhimista dakhliga dakhliga ee macaamiisheeda iyo dib-u-habeyn lagu sameeyo caasimadda, si markaa loo yareeyo, loona hagaajiyo maaraynta mashruuca.
fiirin qoto dheer ee mashaariicda ugu weyn ee Turkiga jid iyo tareenka
Russia ayaa doonaya in ay ka qaybqaataan mashruuca dhismaha waddada tareenka ee Turkey
Russia rabto inaad ka qayb mashruuca dhismaha waddada tareenka ee Turkey
Spain, ayaa sheegay in ay xiiso mashruuca tareenka ee Turkiga
3 Turkiga. Grand Bridge Nissibi ayaa furan doonta Abriil
T26 ugu weyn dalka Turkiga ayaa tunnel gaadiidka, dhammaan doontaa in October
RayHaber 17.10.2017 Warbixinta Shirka
3. Bridge si wadajir ah